Saka zviri nyore iwe unogona kuvharira zvevakuru zvevana vako iPhone uye iPad | Nhau dze iPhone
Ndizvo zviri nyore iwe unogona kuvharira zvevakuru zvevana vako iPhone uye iPad
Miguel Hernandez | 19/05/2022 19:00 | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa, dzakawanda
Nharembozha, ingave iPhone, iPad kana chero imwe mhando, iri mukati mekusvikirwa kwevadiki pazera diki nediki. Kukurumidza kwavo kujaira kwerudzi urwu rwechishandiso kunovaunza padyo nezera redhijitari kutanga, kuwana marudzi ese eruzivo. Dambudziko, dzimwe nguva, nderekuti zvakawanda zvemukati zvinogona kutariswa painternet zvinonangana nevanhu vakuru, chimwe chinhu chinoitikawo paterevhizheni.
Saka zviri nyore iwe unogona kuvharira marudzi ese ezvinyorwa zvevakuru senge mapeji ewebhu, mafirimu nemimhanzi kudzivirira vadiki kuti vasasvike pasina kutariswa.
1 Screen nguva, yakanakisa iOS uye iPadOS yevabereki kudzora
2 Maitiro ekumisikidza skrini nguva
3 Isa miganhu uye vhara zvevakuru zvemukati
Screen nguva, yakanakisa iOS uye iPadOS yevabereki kudzora
Shandisa nguva Icho chinhu chatakataura nezvacho kasingaverengeki uye kutaura zvazviri zvimiro kana kugona kwave kuchikura neimwe vhezheni itsva yeIOS. Zvakanyanya, zvekuti paunotanga iPhone nyowani, imwe yematanho ekutanga maererano nekumisikidza ndiyo chaiyo yekushanda uku, kana ukafunga kuimisa, hongu.
Nezvikonzero zviri pachena, munhu mukuru haazodi kutariswa kwekushandiswa kweiyo iPhone kana iPad, zvakanyanya maererano nekurambidzwa kwezvimwe zvemukati, zvisinei, ivo vanoita. Inogona kutibatsira kana zvasvika pakuziva zvakadzama sei uye kunyanya kuti tinoshandisa sei iPhone yedu.
Iva sezvazvingaita, nguva yekushandisa yashanduka kuita chinhu chakakosha uye yakawedzerwa kukudzora kwevabereki kweIOS uye macOS zvishandiso zvakajairika, zvichiita kuti basa iri rive nyore kuvabereki vanoda kuti vana vavo vatange kusangana nehunyanzvi, kumisa mimwe miganho inopa kuwedzera kwerunyararo kune iyo. kumba.
Ndosaka tichida kukuratidzai kuti sei shandisa nemazvo nguva yekushandisa kuitira kuvhara kana kutarisa kuwanikwa kunoitwa nediki reimba yezvinyorwa izvo Internet inoita kuti zviwanikwe kwavari.
Maitiro ekuita sei nguva yekushandisa
Danho rekutanga, zviripachena, ndere kumisa mashandiro aya kuitira kuti tigone kugadziridza maparamita ayo uye saka toita zvigadziriso zvinotifadza. Nokuda kweizvi tichaenda kune application marongero ye iPhone kana iPad, uye mune rimwe remapeji ekutanga atichawana shandisa nguva. Kana isu tikasawana sarudzo, tinokuyeuchidza kuti iyi application ine bar yekutsvaga kumusoro, yatinogona kunyora nguva yekushandisa uye tichaiwana munguva pfupi.
Kamwe mukati, sarudzo inooneka shandisa "nguva yekushandisa", kwatinogona kuwana mushumo wevhiki nevhiki neruzivo rwenguva yekushandiswa uye kutsanangura miganhu yezvikumbiro zvatiri kuda kubata. Aya ndiwo maitiro ekutanga e kushandisa nguva:
Mishumo yevhiki nevhiki: Tarisa mushumo wevhiki nevhiki nedata panguva yekushandiswa.
Nguva yekuzorora uye mashandisirwo ekushandisa miganhu: Iwe unotsanangura nguva yekuve kure nechiratidziro uye iwe unogona zvakare kuseta nguva miganho yezvikamu zvaunoda kubata.
Zvibvumirano: Iwe unogona kuseta zvirambidzo zvichibva pane zvakajeka zvigadziriso zvemukati, kutenga, kudhawunirodha uye, pamusoro pezvose, kuvanzika.
Kodhi yenguva yekushandisa: Iwe unogona kubata nguva yekushandiswa zvakananga kubva ku iPhone kana kushandisa kodhi pane mudziyo kubvumidza kumwe kufamba.
Kana tikangoimisa, ichatibvunza kana iyo iPhone iri yedu, kana yevana vedu, kana tikamisa iyi se iPhone yevana vedu, tichakwanisa kugadzirisa kudzora kwevabereki kupfuura nguva. chiito chakateverwa Vanozotibvunza mamwe magadzirirwo:
Gadzira nguva yekushandiswa yatinogona kugadzirisa nekukasira.
Seta muganhu wekushandisa kwezuva nezuva. Kana muganho wekushandiswa kwemazuva ese wasvika, inokumbira kodhi kana mvumo yekukwanisa kuenderera mberi nekushandisa mudziyo kana kuwedzera nguva yekushandisa.
Dzora zvimwe zvinhu.
Isa miganhu uye vhara zvevakuru zvemukati
Takatokurukura pane dzimwe nguva nzira yekusimbisa kushandiswa kwechinguvana kumiganhu yeIOS, saka nhasi tichatarisa pane zvirambidzo zvekuwana uye miganhu zvichienderana nerudzi rwemukati, kureva, vhara vakuru kana zviri pachena pane iyi iPhone kana iPad.
Chekutanga chatichaita kumisa zvirambidzo pakuiswa kwezvikumbiro, nenzira iyi, isu tichavadzivirira kubva kuisa mamwe maapplication anovabvumidza kuwana vakuru kana zviri pachena. Kuti uite izvi, isu tinotevera nzira inotevera:
Itunes neApp Store Chitoro
Dzokorora kutenga uye kudhawunirodha muzvitoro: Usabvumire
Inoda password: Nguva dzose inoda
Iye zvino yave nguva yekuisa miganhu pamhando yezvinyorwa zviripo pane iyi iPhone kana iPad, uye izvi zvakare zvakatwasuka.
Pano isu tine sarudzo dzakasiyana dzatiri kuzotsanangura kuitira kuti usarudze imwe neimwe yezvirongwa zvayo:
Zvemukati zvinotenderwa muzvitoro:
Mimhanzi, podcast uye kutanga: Tinogona kusarudza pakati pezvakakodzera chete zvemukati, kana zvakare pachena
Zvikamu zvevhidhiyo: Batidza kana kudzima vhidhiyo ye clip
Mimhanzi profiles: Seta nhoroondo yemimhanzi inoenderana nezera
Mafirimu: Isu tinokwanisa kusarudza zera rezera rekusarudzwa kwemafirimu muchitoro
Zvirongwa zveTV: Isu tinokwanisa kusarudza zera rezera rekusarudzwa kwemafirimu muchitoro
Mabhuku: Tinogona kusarudza pakati pemabhuku akakodzera, kana kuti ane zviri pachena
Zvishandiso: Tinogona kusarudza zera rekusarudza mafirimu muchitoro
Zvikamu zveApp: Batidza kana kudzima zvimedu zveapp
Kupinda kusingabvumirwe: Isu tinopa rusununguko rwakakwana rwekuwana pawebhu
Deredza kupinda padandemutande revakuru: Tinogona kuvharira mawebhusaiti akaonekwa sevanhu vakuru, uye towedzera mamwe kuti agare achibvumira, kana kugara achivharisa
Zvekutsvaga paWebhu: Bvumira kana vhara
Mutauro unobuda pachena: Bvumira kana vhara
Uye pakupedzisira, nhevedzano yekushanda mukati meGame Center yatichazofuratira nekuti ivo vanozoenderana nemhando yega yega yemushandisi. Muchiitiko ichi, isu tinokurudzira kuwedzera rudzi rwezvirambidzo zvese zviri muzvinyorwa zvinotenderwa muzvitoro, uye zvechokwadi muwebhu zvirimo, nenzira iyi, kuwana kuchave kushoma. Kuti uwane mamwe kuchengetedzwa, tinokurudzira sarudzo kudzikisira kupinda pawebhu yevakuru, wedzera anonyanya kufarirwa mawebhusaiti kune block nemaoko.
Uye ndizvo zviri nyore kudzikamisa kupinda kwevadiki kumba kune zvirimo zvinorondedzerwa se "zvevakuru" kana zvakajeka pane mamwe mapeji ewebhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Ndizvo zviri nyore iwe unogona kuvharira zvevakuru zvevana vako iPhone uye iPad
Apple Inovhenekera Zvitsva Zvitsva Zvekuwanika Zvimiro zveIOS
Runyerekupe nezve Apple Watch Series 8 ine flat dhizaini inodzoka